China Runjin © Krunt ™ -N1000 Ice Cream Igwe Igwe Igwe na rụpụta na ụlọ ọrụ | Runchen
Ihe oyi, agwakọta na ịpịa ice cream na ikuku na ice cream. Kpochapụrụ elu oyi nke ngwaahịa ndị ọzọ.
A na-atụkọta ngwakọta ihe nracha ahụ n'ime ihe na-eme ka ihe na-eme ka ihe na-egbu mmiri. A na-agbanye ikuku ikuku mgbe niile n'ime cylinder na ngwakọta. N'oge ngabiga site na cylinder ikuku na-adaba n'ime ngwakọta site na dasher. Lium amonia nke na-amịpụta n'ime jaket jụrụ oyi gbara gburugburu cylinder ahụ na-enye oyi. Igwe anaghị agba nchara pịrị ọnụ wepụ friji oyi kpọnwụrụ si n'ime mgbidi nke cylinder, na nke abụọ gia mgbapụta na-ebute ice cream site na njedebe njedebe nke cylinder na-egbuke egbuke na igwe na-ejuputa.
Frunt ™ -N1 friza na-aga n'ihu na-ezute 3-A ịdị ọcha ọkọlọtọ akara nke Foods & Dairy Industry Supply Association, USA. Igwe nju oyi na friji bụ nke igwe anaghị agba nchara. Akụkụ niile na-akpọtụrụ mix na ice cream bụ nke igwe anaghị agba nchara.
Echichi. Friza ndị ahụ bụ akụkụ nke onwe ha dị njikere ijikọ na ike eletriki, igwe nju oyi, ikuku agbakọtara na ngwakọta ngwakọta.
Na-ajụ oyi cylinder mee ka nke nickel dị ọcha na ime ya siri ike chromium plated na enyo emechara. A na-eji igwe anaghị agba nchara rụọ ọrụ dasher, nke ejiri akara ugo na bekee.
Igwe friji ọnọde ike jụrụ mgbe niile iji hụ na anụ ice cream na-arụ ọrụ na viscosity. N'oge nkwụsị oge na mgbe ọ bụla a na-emechi ngwa nju oyi ntụgharị na njikọta na nkwụsị ozugbo, a na-etinye gas na-ekpo ọkụ iji gbochie oyi. Ngwunye amonia nke mmiri kwesịrị ịbụ nke na-enweghị anwụrụ ọkụ ma nwee nrụgide zuru oke nke Ogwe 4 (58psi) na mmịpụta ọkụ kwesịrị ịbụ -34 ℃ (-29 ℉).
Drivegbọala. A na - ebufe ikike site na moto mbu site na V-bel.
Mix na ice cream nfuli bụ nfuli gia, na-agbanwe agbanwe maka njedebe ikpeazụ iji kwụọ ụgwọ maka ejiji nkịtị. Ime ụlọ nke igwe anaghị agba nchara bụ chromium plated iji belata ụdị uwe a.
Ozugbo akwụsị na-enye ohere nkwụsị nwa oge na mmepụta ihe na ntakịrị mfu nke ngwakọta na mgbanwe na ogo ice cream.
CIP (Ebe dị ọcha). A na-ehicha akụkụ niile na-enweta kọntaktị na mix na ice cream n'emebighị. Mgbe ị na-eme ka ihe omume CIP rụọ ọrụ na-achịkwa ogwe njikwa, wiil ndị na-agbapụta mgbapụta na wiilị ndị na-agbapụta agbapụ na-ahapụ ma nye ohere maka nhicha dị arọ. Nfuli na dasher na-akpaghị aka na-arụ ọrụ n'oge ụfọdụ n'oge usoro nhicha.
Mkpakọ ikuku site na ntanetị ndị dị ugbu a chọrọ maka njikwa nke nfuli na nfuli CIP.
Ogwe njikwa. A na-arụ ọrụ niile nke igwe ahụ site na panel nke na-agụnye mita maka ibu moto, nlele ikuku, ịmalite ma kwụsị bọtịnụ push maka nfuli na isi moto yana njikwa maka njikwa ammonia. Mgbapụta ọsọ enwere ike idozi ya site na 10 ~ 100%.
Gwakọta ikike mgbapụta si na 80 ~ 550Litre / hr (21 ~ 145 US Gal).
Standard ngwa gụnyere otu ngwaọrụ, usoro ọkọlọtọ nke spares, sprockets maka ịgbanwe mgbanaka silinda na pole maka min. ọsọ ọsọ.
1000Litre / hr (270 US Gal) isi n'okpuru ọnọdụ:
Inlet mix okpomọkụ + 5 ℃ (+ 41 ℉) tinyekwa ice ude okpomọkụ -5 ℃ (＋ 23 ℉) mmiri okpomọkụ -34 ℃ (-29 ℉)
Mmanụ na amonia <30PPM
Gbanwee 100 ％
Mix ụdị: Nkịtị ice ude mix nwere 38% ngụkọta siri ike. N'elu nnata nke ezigbo ngwakọta uzommeputa a kapịrị ọnụ ikike na tinyekwa okpomọkụ nwere ike kpebisie ike.
Frunt ™ -N1 Nhọrọ akụrụngwa
Valvụ ụzọ atọ na akwa akwa maka ice cream tinyekwa piping.
Tinyekwa ice ude nlele na akwa akwa maka ice cream tinyekwa piping.
Tinyekwa ice ude okpomọkụ nlele na akwa akwa maka ice cream tinyekwa piping.
Mkpụrụ nri mgbapụta na-eri nri mmiri mmiri ekpomeekpo na agba? na ụfọdụ hà n'ime-na cylinder.
Kwụsị valves maka refrjiraeto.
Valvụ nchekwa A kwadoro TüV - achọrọ valvụ nchekwa maka sistemụ friji - imewe n'ezie dịka iwu obodo si dị.
Onye na-agba ọsọ ọsọ maka nhazi nkwụsị ọsọ ọsọ.
Freon imewe. Akpan mere maka Freon 22. ubé belata ikike.
Ogologo ikuku ikuku ijikwa overrun.
Ikpocha ikuku na nzacha ka mma abịakọrọ ikuku mma.
Akụkụ mapụtara maka mmezi 3000hrs ma ọ bụ 6000hrs.
Njikọ ike 3 ~ 380 V ， 50 HZ
Oriri ike 17 kW
Isi moto 15 kW
Mgbapụta moto 0,75 kW
Max. friji ibu 30 kW26000 kcal / h (34 Celsius C / 29 ° F mmiri ọkụ)
Amonia ọdịnaya 12 n'arọ (NH3)
Mkpakọ ikuku 2 n m³ / h (min. 6 mmanya mgbali)
Ike mgbapụta 200/1000 Liter / Ọrụ Nchịkwa52-260 US Gal / hr (100% ọzịza)
Piping akụkụ (ga-agbaso iwu obodo)
Mmiri ahịrị Ø48 mm
Mmiri mmiri Ø 18 mm
Ahịrị gas na-ekpo ọkụ Ø 18 mm
Igbapu ahịrị Ø 18 mm
Usoro nchekwa Ø 18 mm
Abịakọtara ikuku uzo mmiri akara 6 mm
Gwakọta ntinye ntinye Ø 25.4 mm
Ice cream tinyekwa piping Ø 38.1 mm
1 mmanya1 lita
= 1.02 kp / cm² = 100 kPa = 14,5 psi= Galọn 0.2642 US
= 1.22 imp. galọn
Nke gara aga: Runjin © Krunt ™ -N600 Ice Cream Igwe Igwe
Osote: Runjin © Krunt ™ -N1200 Igwe Friji Igwe Friji